Waldaan Dargaggoota Oromoo Minisootaa artiist Haacaaluu Hudeessaa dhaa sirna yaadannoo qopheesse. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioWaldaan Dargaggoota Oromoo Minisootaa artiist Haacaaluu Hudeessaa dhaa sirna yaadannoo qopheesse.
is live now.
Lammiiwwan Oromoo Yunaaytid Isteets, godinoota adda addaa keessa jiraatan ajjeefamuun artiisti Haacaaluu erga dhagahamee qabee aarii fi gadda isaanii hiriiraa fi walgahiiwwaan qophaahan irrattti ibsachaa jiran. #HaacaaluuHundeessaa
Suuraa: Waldaa Dargaggoota Oromoo
AMBOO, WAASHINGITAN, DIISII —(voaafaanoromoo)—Reeffi artistii beekamaa fi jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa helikooptaraan gara bakka dhalata isaa Ambootti geessamee jira. Yeroo gabaasaan kun qindeessametti reeffi Haacaaluu mana warra isaa magaalaa Amboo, ganda Toorban Kutaayee jedhamu dhaqqabuun isaa himamee jira.